အကြွင်းမဲ့ အာဏာရှင်စနစ် -သို့မဟုတ်- အတုပြုလုပ်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » အကြွင်းမဲ့ အာဏာရှင်စနစ် -သို့မဟုတ်- အတုပြုလုပ်ခြင်း	31
အကြွင်းမဲ့ အာဏာရှင်စနစ် -သို့မဟုတ်- အတုပြုလုပ်ခြင်း
Posted by ၀င့်ပြုံးမြင့် on Feb 10, 2015 in Creative Writing, Critic | 31 comments
.အာဏာရှင်စနစ်ဆိုတာ စစ်တပ်အားကိုး၊ လက်နက်အားကိုးနဲ့ နိုင်ငံသားတွေကို မတရားဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ထားခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ ယေဘုယျယူဆထားပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပညာရှင် ဂျော့အိုဝဲ ပြောတာကတော့ တိုင်းပြည်တွင်းက လူတွေကို အရူးလုပ်၊ မဟုတ်မဟပ် စိတ်ကူးယဉ်တိုင်းပြည်ကြီး တည်ဆောက်၊ သတင်း အချက်အလက်မှန်သမျှ၊ အတိတ်ဖြစ်ရပ်မှန်သမျှ အလုံးစုံကို အမှန်မဖြစ်အောင် အတုလုပ်နိုင်မှ အဲဒီ တိုင်းပြည်ကလူတွေကို အကြွင်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်လို့ရမှာပါတဲ့။ ဒါကို သူက စကားလုံးတစ်လုံး တီထွင်ဆန်းသစ်ပြီး သုံးသွားခဲ့တယ်။ brainwash ပါ။ လူထုဟာ မဟုတ်တာကို ယုံကြည်ထားရမယ်။ အဲသလို ယုံကြည်ထားမှ အာဏာရှင်စနစ် အဓွန့်ရှည်တည်တံ့မှာပါတဲ့။
.ဂျော့အိုဝဲရဲ့ ၁၉၈၄ မှာ အဲဒီလို စိတ်ကူးယဉ် ကမ္ဘာကို တည်ဆောက်ပြထားတယ်။ BB လို့ခေါ်တဲ့ Big Brother အစ်ကိုကြီးက တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်နေတယ်။ တကယ်က အဲဒီ BB ဆိုတာ ရှိကိုမရှိဘူး။ စိတ်ကူးယဉ် လုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့ အတုအယောင် ခေါင်းဆောင်ကြီး။ တိုင်းပြည်တွင်းမှာ သိပ္ပံပညာတွေ တိုးတက်သလောက် လူသားနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အရာမှန်သမျှ ကို ဖျက်ဆီးထားတယ်။
.လူသားနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့အရာဆိုတော့ ပေါ်ထွက်လာတဲ့မေးခွန်းက လူသားဆိုတာ ဘာပါလဲ။ လူသားကို ဘာတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားသလဲ။ လူသားဆိုတာ ကိုယ်ပိုင်ဇာတိသတ္တိရယ်၊ လွတ်လပ်မှုရယ်၊ အနုပညာခံစားချက်ရယ်၊ တဆက်တည်း မျက်နှာမူရာ သွင်ပြင် ဖော်ပြချက်ရယ် (စက်ရုပ်လို မျက်နှာသေကြီး မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာပါ)၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရယ်၊ ရွေးချယ်ခွင့်တွေရယ်၊ ဒါတွေ ပူးပေါင်းပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတာကို လူသား လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီလူသားရဲ့ အရည်အသွေးတွေကို တန်းညှိပစ်လိုက်မယ်။ ဖျက်သိမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင် ဒါ အသက်ရှိလူကောင် သို့မဟုတ် လူသားစက်ရုပ်တွေပဲ ဖြစ်ကျန်ရစ်တော့မယ်။ လူတွေကို စက်ရုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်ပြီဆိုရင် ဒီတိုင်းပြည်ကို အကြွင်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ် နိုင်ပါပြီ။
.ဂျော့အိုဝဲ ရဲ့ လူတွေကို ဘရိန်းဝပ်နိုင်မှ အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ် နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ ဒီဒ၁သနဟာ ယုတ္တိတန်လွန်း တယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် ယနေ့ကမ္ဘာမှာ ဂျော့အိုဝဲရဲ့ နည်းလမ်းအတိုင်း အုပ်ချုပ် နေတဲ့ တိုင်းပြည် ရှိတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားပါ။ မြောက်ကိုရီးယားမှာဆိုရင် ဘာဘာသာမှ မကိုးကွယ်ရပါဘူး။ bible တစ်အုပ် လက်ဝယ်တွေ့ရုံနဲ့ သေဒဏ်ချပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ တောင်ကိုရီးယားကြားမှာ စစ်မဲ့ဇုန်ရှိတာ သိကြမှာပါ။ မြောက်ကနေ တောင်ကို ပြေးချင်ရင် လွယ်လွယ်လေး၊ တောင်ကလည်း လက်ကမ်းကြိုနေတယ်။ ဒါပေမယ့် မပြေးကြဘူး။ ပြေးရင် နောက်ခံမိသားစုကို သတ်တယ်။ ဒီလို ဖိနှိပ်မှုလည်း ရှိနေတယ်။ တစ်ပြိုင်တည်းမှာပဲ လူတွေကို အယုံသွင်းထားတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေရှိတယ်။
.မြောက်ကိုရီးယားသားတွေကို အယုံသွင်းထားတာကတော့ ခေါင်းဆောင်ကြီး ကင်အီစွန်းဟာ ဘုရား။ တိုင်းပြည်ကို သစ္စာရှိရင် သေတဲ့အခါ ကင်အီစွန်းဆီကို သွားမယ်။ သူတို့ရဲ့ နိဗ္ဗာန်ပေါ့။ ကင်အီစွန်း ရဲ့သား ကင်ဂျုံအီကလည်း ဘုရားသားတော်ပေါ့။ ကင်ဂျုံအီ ကိစ္စချောတော့ အခုတက်လာတဲ့ ကင်ဂျုံအွန်ကလည်း ဘုရားမြေးတော်ပေါ့။ ဘုရားမျိုး ရိုး စဉ်ဆက် အုပ်ချုပ်နေတဲ့ တိုင်းပြည်အဖြစ် သူ့နိုင်ငံသားတွေကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြံကြီးစည်ရာတွေ ၀ါဒဖြန့်ပြီး အုပ်ချုပ် နေတာပါ။ ဒါကြောင့် ကင်ဂျုံ အီ လေဖြတ်ပြီး မာလကဈာန်ကြွတုန်းက ပိတ်တူတောင်ထိပ်ပေါ်က ရေခဲပြင်ပေါ်မှာ ဘာတွေပေါ်လာတာ ညာတွေပေါ်လာတာဆိုပြီး ပေါက်ကရလေးဆယ် အသံလွှင့်လိုက်သေးတယ်။
.မြောက်ကိုရီးယားမှာ အိမ်ပေါက်စေ့ လော်စပီကာတပ်ပြီး ၀ါဒဖြန့်တာတွေကလည်း ငါးနှစ်ကလေးကို ပုံပြောတဲ့ အဆင့်လောက်ပဲရှိတယ်။ ဒါတွေကိုပဲ လူတွေက ယုံနေကြသတဲ့။ လူတွေကို အရူးလုပ်ထားနိုင်မှ၊ အရာရာကို အတုပြုလုပ်ထားနိုင်မှ အကြွင်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ် သက်ဆိုးရှည်တည်တံ့မယ်ဆိုတဲ့ ဂျော့အိုဝဲရဲ့ ဒ၁သနအတိုင်း တသဝေမတိမ်း အုပ်ချုပ်နေတဲ့ တိုင်းပြည်ပါ။
.သို့သော် .. သို့သော် ဂျော့အိုဝဲ ချမပြတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ အကြွင်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ် ဖြစ်ထွန်းနေတဲ့ တိုင်းပြည်တွေ ရှိတယ်။ ဘယ်တိုင်းပြည်တွေလဲဆိုတော့ ကျမ ဥာဏ်မီသလောက် ပြောရရင် အစ္စလာမ္မစ် တိုင်းပြည်တွေထဲမှာ မွတ်စလင် ဘာသာ ၉၉ %ကနေ ၁၀၀ % ကိုးကွယ်တဲ့ တိုင်းပြည်တွေ တွေ့ရပါတယ်။ အစွန်းရောက်တွေလို့ ပြောရင် ကာယကံရှင် ဘာသာဝင်တွေ ဒေါသပုန်ထမယ်။ အာဖဂန်နစ္စတန်၊ ပါကစ္စတန်၊ အီရန်၊ အီရတ်၊ ဘက်ဘနွန်၊ ဆီးရီးယား .. စတဲ့တိုင်းပြည်တွေ ခုထိကို မငြိမ်းချမ်းနိုင်ဘူး။
.ဒါဆို ဗုဒ္ဓဘာသာ တိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့ မြန်မာပြည်မှာကကော အစွန်းမရောက်ဘဲ ဘာဖြစ်လို့ အာဏာရှင်စနစ် သက်ဆိုးရှည်ခဲ့သလဲလို့ မေးစရာရှိပါတယ်။ အဲဒီ မေးခွန်း ကျမ ဖြေလို့ မရပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက ဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်ဟာ မစ္ဖျိ မ ပဋိပဒါ အလယ်အလတ် လမ်းစဉ်ဖြစ်ကြောင်း၊ သစ္စာလေးပါး၊ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးအကြောင်း သူတို့ပြောပြကြပါလိမ့်မယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်တဲ့ ဘာသာခြားတစ်ယောက် အမြင်မှာတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ပေါကြောင်ကြောင် အနိုင်ဆုံးဘာသာ၊ ရုပ်တုကြီး ရေမွှေးဆွတ်ပြီး ဖင်ဘူးတောင်းထောင် ထိုင်ရှိခိုးနေတဲ့ ဘာသာအဖြစ် သူတို့မြင်ကြပါတယ်။ သူတို့တတွေ အမြင်မှာ တစ်နေ့ နမားငါးခါ ဖတ်ရတဲ့၊ နေမင်းကို နေ့တိုင်းရှိခိုးရတဲ့ အစ္စလာမ်တွေထက်တောင် ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ပေါကြောင်ကြောင်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီတိုင်းပြည်မှာ အာဏာရှင်စနစ် သက်ဆိုးရှည်ခဲ့တော့ ဂျော့အိုဝဲ ပြောသလို လူတွေ အရူးလုပ်ခံထားရသလား၊ အတုတွေကို ယုံနေကြသလား ပြန်ဆန်းစစ်ရပါတော့မယ်။
.အာဏာရှင်စနစ်မှာ လူတွေကို လူမဆန်စွာ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း Thuggery ကတော့ မပါမဖြစ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ် အနေနဲ့ ပါရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါ အခရာ မဟုတ်ဘူး။ အခရာအကျဆုံးက အတုလုပ်ခြင်း၊ တနည်း လိမ်ညာထားခြင်း။ ဒီနည်းနဲ့ လူ့ဦးနှောက်ကို သတ်ထားခြင်း၊ လူသားရဲ့ ဖွဲ့စည်းမှုကို သတ်ထားခြင်း။
.ဒါကြောင့်မို့ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကို အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင် စစ်တပ်အခြေပြုတဲ့ အစိုးရက လက်နက် အားကိုးနဲ့ လူတွေကို မတရား ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ပြီး အုပ်ချုပ်ရင် ရမယ်လို့ ယူဆထားတဲ့ ပုံစံဟာ ဂျော့အိုဝဲရဲ့ သီဝရီနဲ့ ဆိုရင် မကိုက်ညီဘူး။
. ဂျော့အိုဝဲ ရဲ့ သီဝရီအရဆိုရင် အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်နိုင်အောင် ဖန်တီးထားရတယ်။ အဓိက အတုပြုလုပ်ခြင်း။ ဒါကို ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေက မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် နဂိုအခံရှိနေပြီးသား (အတုရှိပြီးသား) အခြေအနေပေါ်မှာ တက်အုပ်ချုပ်လို့ ရပါတယ်။
.အစ္စလာမ္မစ်တိုင်းပြည်တွေမှာ ဘာသာရေးက ခိုင်းစေတဲ့အတိုင်း အမျိုးသမီးတွေကို နှိပ်ကွပ်ထားနိုင်တယ်။ ဦးခေါင်းကို ခြုံ တာတောင်မှ ၃ မျိုးရှိတယ်။ ခေါင်းလုံရုံ ခြုံ တဲ့ ပ၀ါကို ရိုစရီ၊ ခေါင်းနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ခြုံ တာက ချာဒိုး (Chado) ၊ မျက်လုံးလေးပဲ ဖော်ထားပြီး တစ်ကိုယ်လုံး ခေါင်းမြီးခြုံ တာက ဘာကာ ( Burqa) ( najib လို့လည်း ခေါ်တယ်) ။ ဒီလောက် ပူလောင်အိုက်စပ်နေတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ အပူဓာတ်ကို စုပ်ယူတဲ့ ၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ဘယ်လိုမှ မညီညွတ်တဲ့ အမည်းရောင်စောင်ကြီးကို ခြုံ ခိုင်းထားနိုင်အောင် ဘာသာရေးက စွမ်းပြီဆိုမှတော့ အဲဒီတိုင်းပြည်ကလူတွေရဲ့ ဥိးနှောက်ဟာ အရှိတရားထက် အတုတရားကို ပိုယုံတယ်ဆိုတာ ပြောစရာကို မလိုတော့ပြီ။ အပျိုရည်မပျက်အောင် စောင့်ထိန်းကြရတာကတော့ လူတိုင်းအသိ။ မြောက်ကိုရီးယားမှာဆိုရင် ကျားရောမရော စောင့်ထိန်းရတယ်။
.အစ္စလာမ္မစ်တိုင်းပြည်တွေမှာ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် မူလာ တွေ အင်မတန် တန်ခိုးထွားတယ်။ အယာတိုလာ ခိုမေနီ က စနစ်တကျ ဘုရားဝတ်ပြုနည်း လက်ချာရိုက်ရင် တက်ရောက်တဲ့ ပရိသတ်က သိန်းသန်း ချီသတဲ့။ ဘာသာရေးဆရာတွေ တရားဟောကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်၊ တနည်းဆိုရင် အဆိုအမိန့်တွေ အားကောင်းတဲ့ တိုင်းပြည်ဟာလည်း အတုကြီးစိုးတဲ့ တိုင်းပြည်ပါ။ မြောက်ကိုရီးယားမှာကတော့ ဘာသာရေးဆရာ မရှိ။ ဒါပေမယ့် ကျောင်းနေရွယ် ကလေးတွေဟာ ပညာရှိကြီး ကင်အီစွန်းရဲ့ ဒ၁သနတွေ၊ အဆိုအမိန့်တွေ မိန့်ခွန်းတွေကို အလွတ်ကျက်ကြရတယ်။
.မြန်မာပြည်မှာဆိုရင် အလောင်းမင်းတရားခေတ်ကတည်းက လက်ရုံးမီးတောက်တယ်ဆိုတာ အခုထိ ယုံကြတုန်း။ စကြ၀တေးမင်းတို့ ဘုန်းတန်ခိုးတို့ကို ယုံကြတဲ့ခေတ်တွေ ရှိတယ်။ ဦးနေ၀င်းခေတ်တုန်းကလည်း လူတွေကို မျက်စိပိတ်၊ နားပိတ်ပြီး အင်မတန် သယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝတဲ့ တိုင်းပြည်၊ တစ်မူးရလို့ တစ်ပဲလှူ တဲ့ သူတော်ကောင်းတိုင်းပြည်ကြီးအဖြစ် လံကြုပ် လုပ်ခဲ့တယ်။ န၀တခေတ် ရောက်တော့ ကျမ အထင် တလွဲဘာသာရေး သိပ်အားကောင်းလာခဲ့တယ် ထင်ပါတယ်။ ဘိုးတော် ခေတ်ဖြစ်သွားခဲ့တာ။ အစ္စလာမ်တွေ အားအားရှိ ပုတီး တချောက်ချောက် စိပ်နေသလို မြန်မာတွေလည်း ပုတီးပဲ။ ဆရာတော်ဘုရားတွေကလည်း တန်ခိုးကြီးကြပါဘိတော့။ ထွက်တဲ့ စာအုပ်တွေကလည်း နက္ခတ္တရောင်ခြည်လိုမျိုး ။ လူတွေကို အဘတို့မလို့ နေ့ချင်းညချင်းပဲ ကြီးပွားတော့မလို။ နတ်တွေ နဂါးတွေ ယုံတဲ့လူကလည်း ဒုနဲ့ဒေး။ တစ်နေ့ကို ဒိဝါတပတိ ဂါထာ အကြမ် ၁၀၀ ရွတ်ရင် ဘာဖြစ်မယ်ဆိုပြီး ဂါထာတွေ မိုးပျံနေခဲ့ကြတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း ၂လုံး ၃လုံးနဲ့ မျှားထားတယ်။ ဒီကနေ့မှာတောင် တရားပွဲတွေ တခြိမ့်ခြိမ့် ကျင်းပပြီး အဆိုအမိန့်တွေနဲ့ သူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်ကြီး ဖွံ့ဖြိုးလို့။
တခြား အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာ ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဟာ သိပ်တော်မှဖြစ်တယ်။ ခေါင်းဆောင်တွေက သိပ်တော်လွန်းအားကြီးလို့ စာအုပ်တွေပြု စု၊ အဆိုအမိန့်တွေ တီထွင်ပြီး သူတို့ကိုယ်သူတို့ ပညာရှိကြီးတွေအဖြစ် ဖန်တီးလိုက်ကြရတယ်။ ဒီတိုင်းပြည်မှာ ဒါမျိုး လုပ်နိုင်လောက်တဲ့လူ မရှိဘူး။ အတုတွေကို ယုံကြည်ပြီးသား လူထုပေါ်မှာ လက်နက်အားကိုးနဲ့ လူစွာလုပ်၊ အသင့်တက်အုပ်ချုပ် လိုက်တာ။
.အရှင်လတ်လတ် ငရဲပြည်ရောက်သွားတဲ့ အင်မတန်ချမ်းသာကြွယ်ဝခဲ့တဲ့ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် မူလာတွေ သိပ်တန်ခိုးထွားခဲ့တယ်။ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေ သြဇာထက်ပြီဆိုရင် အဲဒီတိုင်းပြည် ကြေတော့တာပဲ။ ပီကေ ဇာတ်ကားထဲမှာ ဘုရား မရှိဘူးလို့ မပြောဘူး။ ဘုရားရှိချင်လည်း ရှိမယ်။ ဒါပေမယ့် လူသားနဲ့ ဘုရား ဆက်သွယ်ရေးမှားယွင်းနေတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကြားထဲမှာ ကြားခံအဖြစ် Duplicate God ရှိနေလို့ပါပဲ။ ။
.ဖေဖော်ဝါရီ ၂ရက်၊ ၂၀၁၅။
wintpyone myint has written 55 post in this Website..
အလင်းဆက် says: 1984 ရယ်
The Interview ရယ် ရဲ့ အဆက် အချက်အလက်တွေပေါ့နော
နောက်ထွက်တော့မယ့် မိဘမဲ့တိုင်းပြည်ကိုလည်း မျှော်နေမိပါကြောင်းးး
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ပို့စ်က တင်မရဖြစ်နေတာ အလက်ဇင်း တင်ပေးလို့ ရသွားတာ ကျေးဇူးပါပဲ ဆက်ဆက်ရေ။ The Interview ကို ဝေဖန်ချင်နေတာ။ PK ကိုလည်း ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်နော် သိလား။ မင်းသမီးလေး သိပ်ချောတာ။
Kaung Kin Pyar says: Post လေး ကောင်းလိုက်တာ…
ဆက်ရေးစေချင်တယ် မပြုံးရေ…။ ဗဟုသုတတွေလဲ အများကြီး ရပါရဲ့…
တွေ့ပလား အလင်းဆက်…။ အတိုက်စားခံထားရတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ ဆိုတာ…(ဆိုင်မဆိုင်တော့ သိဝူး….ဆွဲစိလိုက်ပြီ…)
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .အဲလို ပို့စ်မျိုးတွေ တင်လို့ အမကို ချောင်းရိုက်ချင်နေတဲ့လူတောင် ရှိတယ် စကိုင်းရေ။
အချစ်​ကံ​ခေ​ပေမယ့်​ အနှစ်​ကျန်​​စေချင်​တဲ့ ဂီ says: အဘ ၀ူးတိန့်​ရှိန်​ ကျမ္မပါဇီ
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ခက်တာပဲ ဂီဂီ။ ဒီပို့စ်တင်ရင် ဒါမျိုး အထင်လွဲခံရမယ် ဆိုတာ သိပြီးသား။ ဂီဂီက စာတစ်ကြောင်းထဲပေမယ့် အမ အကုန်သဘောပေါက်တယ်။ အမတို့ ရှင်းကြရအောင်။ မေးခွန်းတွေ မေးထားပါ။ အိမ်မှာ လိုင်းသိပ်မကောင်းလို့။ ကလေးသိပ်ပြီး ဆိုင်ပြေးသုံးနေရလို့။ မြန်မြန် ဖြေမပေးနိုင်တာ သီးခံပါ။ မေးချင်တာတွေ အားမနာတမ်း ရက်ရက်စက်စက်သာ မေးကြ။
.တကယ်က အရီးလတ်က ခဏခဏပြောတယ်။ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်မှာ ကြောက်ရတယ်လို့ သူပြောလွန်းလို့ပါ။ စတုတ္တမဏ္ဍိုင်ကို လွှတ်ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် အတု ပြုလုပ်လို့ မရတော့တဲ့အခါ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်လို့ မရကြောင်း ဆိုတာရယ်၊ ပြီးတော့ အခု ကျောင်းသားလေးတွေ ခဏခဏအော်နေကြသလို အာဏာရှင်စနစ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ ပြန်မဖြစ်ဘူးဆိုတာရယ် ကို အဓိက ပြောချင်တာပါ။ သူတို့ ဘယ်တော့မှ dictator ပြန်လုပ်လို့ မရတော့ပါ။ greedy rival အဆင့်လောက်သာ ရှိတော့တာပါ။ အခုက လူပုဂ္ဂို လ်ပဲ တိုက်နေကြတယ်။ အပြောင်းအလဲ အခြေအနေတစ်ရပ်လုံးကို ထည့်မစဉ်းစားကြဘူး။ သမ္မတ နေရာ ဘယ်သူတက်တက်၊ အပြောမလွတ်ဘူး။ နောင်ဆို သမ္မတလုပ်တဲ့လူ ထိုင်တောင်ငိုရဦးမယ်။ တိုင်းပြည့်ကံကြမ္မာဟာ သူတို့လက်ထဲမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ကိုယ့်လက်ထဲမှာ။ ကြောက်ရမှာက ပြည်တွင်းစစ်။
. အင်း အရီးလတ်ကတော့ အခုဟာ revolution ပါတဲ့။ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်လို့ ရနိုင်လို့တဲ့။ အမကတော့ အခုဟာကို evolution မြင်ပါတယ်။ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်လို့ကို မရဘူး။ မရ ရအောင်လှည့်ရင်လည်း သက်ဆိုးမရှည်နိုင်တော့ပါ။ ထုံးစံအတိုင်း အီဗော်လူးရှင်း ရဲ့ အားနည်းချက် တဖြန်းဖြန်းကွဲထွက်တာ ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ အခုလည်း သံဃာအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ပါတီတွေ တဖြန်းဖြန်းကွဲနေတာပဲ။ လူသိတာနဲ့ လူမသိတာပဲ ကွာတယ်။
.အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာအနေနဲ့ ၁၉၈၄ ကို မသင်မနေရ ပြဌာန်းစာအုပ်လုပ်ခဲ့တာ။ မြန်မာပြည်မှာက တိတ်တိတ်ခိုးဖတ်ရတာ။ အမ နောက်တစ်အုပ်ထွက်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ အဲဒါ ထွက်နိုင်ရင် ရသ+ နိုင်ငံရေး စာပေကို သီးညည်းခံပြီး ဖတ်ကြည့်ဖို့ ပြောချင်ပါတယ် ဂီဂီရေ။
ဦးကျောက်ခဲ says: အဟိ … Free Thinker ကျောက်စ် … လွတ်လပ်စွာမန့်ရရင်…
ဘယ် … သက်ရှိဘုရားကိုမှလည်း မမြင်ဖူးပါ…
ဘုရားကလူတွေကို ဖန်ဆင်းသလား ၊ မဖန်ဆင်းဘူးလားတော့မသိ…
လူတွေဖန်ဆင်းထားတဲ့ ဘုရားတွေနတ်တွေကတော့ အများကြီးပဲ…
ဘုရားတွေရဲ့ နုတ်ကပါတ်တော် ဗျာဒိတ်စကား တဆင့်ပြန်ပြောတယ်ဆိုပြီး…
လူလူချင်း အမုန်းတွေပွါး စစ်တွေဖြစ် ၊ သောက်သောက်လဲသေကြေတာတော့ မျက်မြင်…
အာဏာရှင်တွေကတော့ သူတို့ သက်ဆိုးရှည်ဖို့ ဘုရားဝါဒကို အားကြီးကြိုက်ကြတယ်…
pooch says: ဘုရားနဲ့ လူတွေကြား ဆက်သွယ်ဖို့ wrong number ရထားတာကိုး အမရဲ့
right number ရအောင် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးရမယ်
Shwe Ei says: -သများကတော့ လက်ရှိ အမပြုံး ချပြထားတဲ့ အမြင်တွေကို သဘူတောတယ်..
-ကြားခံလူလို့ ကွကို သတ်မှတ်ပြီး တဆင့်ပြန်မျှတဲ့ကိတ်စတွေက အနှစ်မပါတော့တာ ကြာဘီ..
-အမေစု ပြောသလို မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ ကိုယ်ပိုင် အသိဥာဏ်တိုးတက်ဖို့လိုနေဘီ..
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .၀င်အားပေးဖတ်ရှုတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ညီမရေ။
ခင်ဇော် says: ဘုရား ကိစ္စ ကိုတော့ မပြောလိုဘူးးး။ ကိုယ့် မမှီ မသိတာတွေ များလို့။ တရား ကိစ္စကိုလည်း မပြောနိုင်ဘူးးး။ ကိုယ်တိုင် မအားထုတ်နိုင်သေးလို့။ သံဃာ ကိစ္စကိုကျ မပြောရဲဘူးးး။ ကိုယ့် ကို ဆဲခံရမှာ စိုးလို့။ အာဏာရှင် ကိစ္စ ကို မပြောသေးဘူးးး၊ ကြောက်ရို့။
kai says: အံမာ..
.. သြကာသ… ငါ့ထိုင်ကန်တော့ကြ…။
ကဲ… နတ်ပြည်သွား…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1350
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .သဂျီး – သဂျီးက အစိုးရဘက်မယိမ်း၊ အတိုက်အခံဘက် မတိမ်းဘဲ ဘာသာရေးဆိုတာကို ဆွဲထည့်လိုက်တော့ ၂မျိုး ထင်ကြမှာပေါ့။ ပထမတစ်မျိုးက ဆိုက်အဘန်းမခံရအောင် ဘာသာရေးဆွဲထည့် တရားခံလုပ်လိုက်တယ်။ နောက်တစ်မျိုးက အစိုးရမကောင်းတာကို ဖုံးဖိနိုင်အောင် ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ်တယ်။
အခု မျှစ်မ က အီကွေးရှင်း ချပေးထားပါတယ်နော်။ စ်ိတ်ထဲမှာ ရှိနေတာကြာပြီ။ မအားတာနဲ့ မရေးဖြစ်တာ။
. ဘာသာရေးလွှမ်းမိုးမှု = အတုဖြစ်ခြင်း = အကြွင်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်။
Mike says: ဆရာတော်ဘုရားတွေကလည်း တန်ခိုးကြီးကြပါဘိတော့။ ထွက်တဲ့ စာအုပ်တွေကလည်း နက္ခတ္တရောင်ခြည်လိုမျိုး ။ လူတွေကို အဘတို့မလို့ နေ့ချင်းညချင်းပဲ ကြီးပွားတော့မလို။ နတ်တွေ နဂါးတွေ ယုံတဲ့လူကလည်း ဒုနဲ့ဒေး။ တစ်နေ့ကို ဒိဝါတပတိ ဂါထာ အကြမ် ၁၀၀ ရွတ်ရင် ဘာဖြစ်မယ်ဆိုပြီး ဂါထာတွေ မိုးပျံနေခဲ့ကြတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း ၂လုံး ၃လုံးနဲ့ မျှားထားတယ်။ ဒီကနေ့မှာတောင် တရားပွဲတွေ တခြိမ့်ခြိမ့် ကျင်းပပြီး အဆိုအမိန့်တွေနဲ့ သူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်ကြီး ဖွံ့ဖြိုးလို့။
.တကယ်တော့ ဘုရားဟောခဲ့တာက ကိုယ်လုပ်မှကိုယ်ရတရားပါ
.အခုကတော့ ငရဲပြည် နဲ့ခြောက်…နတ်ပြည်နဲ့မျှား လုပ်နေကြတော့…အားလုံးတလွဲတွေဖြစ်တာပေါ့
.ဗုဒ်ဓကို ဘ၀ဂ်မပို့ပဲ မဟာလူသားစစ်စစ်အဖြစ်နားလည်ဖို့လိုပါတယ်
.ပြောချင်တာလျှောက်ပြောသွားပီဗျာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12373
ခင်ဇော် says: တကယ်ဗျ။
ကျနော် အသက် ၂၄ လောက်ထိ သာသနာပြုတယ် အသံကြားရင် ဘုရားတည်တာလောက် ညောင်ပင်စိုက်တာလောက် နဂါးရုပ်ထုတာလောက် ပဲ ပြေးမြင်တာ။
တသက်လုံးလည်း ဂလိုပဲ မှတ်ခဲ့ရတာကိုးး
ဖတ်တာကလည်း နက္ခတရောင်ခြည်တို့ ဘာတို့ သိပ်ကြိုက်ခဲ့တာ။
ဒါပေမဲ့ ဘာသာရေး အစ်ရှူးကို ပြောဖို့ မဝင့်တို့ တဂျီးတို့လောက်တော့ သတ္တိမရှိတာ အမှန်ပဲ။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: မယ်ပု၊ ဦးကြီးမိုက် ။။ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုတွေ အသာဘေးချပြီး မျှစ်မကို ရဲရဲတောက် ပြောခွင့်ပေးပါလား။
မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ တော်လှန်ရေးဖခင်ကြီး ကင်အီစွန်းဟာ ပညာရှိကြီးပေါ့လေ။ တိုင်းပြည်ကို လွှမ်းမိုးထားတဲ့ ဂျူရှဲ ဒ၁သန ဆိုတာ ကင်အီစွန်းရဲ့ အဆိုအမိန့်ပါ။ တစ်တိုင်းပြည်လုံး သက်ဝင်ကြည်ညို ကြတဲ့ ဂျူ ရှဲ ဒ၁သန ဆိုတာ အင်္ဂလိပ်လို self-reliance ။ မြန်မာလိုဆို မိမိကိုယ်သာ ကိုးကွယ်ရာ ။ ပါဠိလိုဆိုရင် အတ္တာဟိအတ္တနောနာဋ္ဌော ပါတဲ့။ အဲဒီအာဏာရှင်တိုင်းပြည်မှာ ထွန်းကားတဲ့ ဒ၁သနက မြန်မာပြည်က လူသိများ ဆိုရိုးစကားနဲ့မှ သွားတူနေပါရောလား။ ဆိုရိုးစကားတွေ၊ ဘုရားဟော ပါဠိတွေ၊ အားလုံးဟာ အတုပြုလုပ်နိုင်စွမ်း ကြီးကြတာပါ။ ဆိုရိုးတိုင်းမှာ ချွင်းချက်ရှိတယ်။ ဥပမာ မိမိကိုယ်သာ ကိုးကွယ်ရာ ဆိုရင် `ဘုရားတောင်မှ အမှီရှိမှ ပွင့်တာ´ ဆိုတဲ့ စကား ဘယ်နားသွားထားရမလဲ မသိဘူး။
ဘာသာတိုင်းမှာ အစွန်းရောက်ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ခရစ်ယာန်မှာတောင် ရှိတယ်။ အစွန်းရောက်တွေ အရေအတွက် မများအောင် ထိန်းချုပ်နိုင်ရင် အန္တရာယ်မရှိပါဘူး။ ဘကကျောင်းတွေ နည်းနည်းလျှော့ပေးရင်၊ တရားသံဝေတွေ နည်းနည်းလျှော့ပေးရင်၊ ကလေးတွေအတွက် ခေတ်မီပညာကိုသာ ထွန်းကားအောင်လုပ်ပေးရင်၊ အတုပြုလုပ်နိုင်စွမ်း ကျသွားမယ်။ ဓမ္မစကူးလ်တွေ နင်းကန်လုပ်တာ၊ ဘာသာရေးအသိ မချို့တဲ့ရအောင်ဆိုပြီး ခလေးတွေကို ငယ်ကတည်းက ဘာသာရေးကိစ္စနားချတာ အဲဒါတွေ ကြောက်ဖို့ကောင်းတာ။ လူနည်းစု လုပ်ရင်တော့ ကိစ္စ မရှိဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ပဲပြောပြီးတော့ – ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ပါရမီပါမှ ဖြစ်တာဆို။ အဲဒါဆို ပါရမီပါရင် သူ့ဟာသူ ဖြစ်လာမှာပေါ့။ ဒီလောက်လုပ်စရာ မလိုပါဘူး။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ကေရေ သာသနာပြုတယ်လို့ ပြောကြတာ အမစိတ်ထဲမှာ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အထင်ကြီးနေလို့ ပြောတာ။ သတ္တိသိပ်ကောင်းနေရင် ဂျီဟက်ထဲ ၀င်လိုက်ပေါ့ကွယ် နော့။
ဘာသာရေးအကြောင်း ဝေဖန်ရင် လူမုန်းသိပ်များတာ။ အရီးလတ်ကလည်း ပြောတယ်။ သူတစ်ပါးဘာသာကို မထိပါးတာဟာလည်း ဒီမိုပါပဲတဲ့။ သူ့စကားကလည်း မမှားတော့ ကိုယ်ပဲ မှားနေပြီပေါ့။
ဒါပေမယ့်လေ ဗုဒ္ဒဘာသာဟာလည်း အစွန်းရောက်တာပါပဲ။ သူက အပျော့ဆွဲ။ ဥပမာ ဗောဓိပင်တွေစိုက်တာ၊ ကံ့ကော်ပင်တွေစိုက်တာ သိပ်ကို ဥာဏ်မရှိရာကျတယ်။ မြတ်စွာဘုရားသာရှိနေရင် ဟားမှာ။
padonmar says: ဘာသာရေးမှာ လွဲနေတာတွေ အများကြီးဆိုတာ လက်ခံပါတယ်။
ကြုံကြိုက်ရင်တော့ မျှစ်ကြော်ပြုံးကို မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်ကြီးရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာသင်ခန်းစာဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးတွေ လက်ဆောင်ပေးမယ်။
ဆရာတော်ကြီးအယူအဆကို နည်းနည်း ပြောပြမယ်။
-တိတ်ဆိတ်မှုကို လိုလားတဲ့ မြတ်စွာဘုရားသာရှိသေးလျှင် ယခုခေတ် အသံချဲ့စက်များနှင့် ဖွင့်နေသော အသံမစဲ ပဋ္ဌာန်းပွဲများကို ကြိုက်မည်မဟုတ်။
-ရွာတရွာတွင် စေတီပုထိုးတဆူရှိလျှင် လုံလောက်ပြီ။
-စိတ်ကောင်းရှိဖို့ ပထမ တဲ့။
ပျက်နေတဲ့ အများစုကို ကြည့်ပြီး မကောင်းတာတွေပဲ မြင်နေရတော့ ကောင်းတဲ့ အနည်းစုလေးအကြောင်း မသိကြတာကို အပြစ်မဆိုချင်ပါဘူး။
ဆယ်ပုံမှာ ရှစ်ပုံလောက် ပုပ်နေတဲ့ အသီးကြီးဆိုတော့ အပုပ်လို့ပဲ မြင်ကြမှာပေါ့လေ။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .တီဒုံ – ခင်မင်မှုတွေ အသာဘေးချပြီး မျှစ်ကြော် ပြောမယ်နော်။
.မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်ကြီးရဲ့ စိတ်ကောင်းရှိဖို့ ပထမ ဆိုတဲ့ ကျောင်းတွင်းစည်းကမ်းဟာ ခုတော့လည်း မြန်မာပြည်က လူကုံထံတွေရဲ့ ရသာမွန် စကားတစ်ခွန်းဖြစ်နေပြီပေါ့။ စိတ်ကောင်းရှိဖို့ ပထမ ဆိုတဲ့ စကားကနေ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ်အကျိုးပေးတယ် ဆိုတဲ့ စကားဆီ တည့်တည့်ပဲဆွဲယူလို့ ရနေတယ်လေ။ ဒီတော့ မြန်မာပြည်က လူကုံထံတွေရဲ့ လက်ကိုင်စကားဖြစ်နေခဲ့တာ ဘယ်သူထောက်ပြရဲလဲ။ ကိုယ်အဆင်ပြေနေသရွေ့ ဒီစကားကို သုံးနိုင်ပါတယ် တီဒုံ။ စိတ်ကောင်းရှိဖို့ ပထမ ဆိုတဲ့စကားကနေ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ ကိုယ်အကျိုးပေးတယ် ဆိုတဲ့ စကားဆီ တိုက်ရိုက်ဆွဲယူလို့ ရတဲ့အခါမှာ ဘဘကြီး တို့လည်း သူတော်ကောင်းကြီး ဖြစ်သွားမှာပေါ့။
.လူတစ်ယောက် ကြီးပွားခြင်း မကြီးပွားခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းခံကို နန်းတော်ရာသူရဲ့ပို့စ်မှာ ကိုကြောင် မန့်ထားတာ အဖြေမှန်လို့ မျှစ်ကြော်ထင်ပါတယ်။ နန်းတော်ရာသူက သူ့အဖေ လူရိုးကြီး ဘာလုပ်လုပ် မအောင်မြင်တဲ့အကြောင်း ရေးထားတဲ့ ပို့စ်ပါ။ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ ကိုယ်အကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့ ဘာသာတရားလွှမ်းမိုးတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို မျှစ် မထောက်ခံပါဘူး။ လူတစ်ယောက် အဆင်ပြေတာဟာ သူတော်လို့ပါ။ စိတ်ကောင်းရှိတယ်လို့ တိုက်ရိုက်ဆွဲယူလို့ မရဘူး။
.မြန်မာပြည်အခု ဒီအခြေအနေဆိုက်တော့ လူအများစုက ဘယ်လိုမြင်သလဲဆိုရင် လူယုတ်မာများလို့ ဖြစ်တယ်လို့ မြင်ကြပါတယ်။ မျှစ်မကတော့ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် သူတော်ကောင်းများလို့ ဒီနေ့ဒီအခြေအနေရောက်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ တောသူတောင်သား လူရိုးလူကောင်းတွေ များလွန်းလို့ လူလည်တစ်စု ထင်တိုင်းကြဲလို့ ရနေတာပါ။
ပို့စ်ဟာ ဗုဒ္ဒဘာသာရဲ့ ပျက်နေတဲ့ အပိုင်းကို ရေးထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီပို့စ်ကို နားလည်တဲ့လူ သိပ်မရှိဘူး။ ဘာသာရေးတိုက်ခိုက်မှုလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေတာကို သီဝရီပိုင်း ဖြေရှင်းထားတဲ့ပို့စ်ပါ။ ၁၉၈၄မှာ အိုဘရိုင်ယန် ပြောတဲ့စကား၊ အရာအားလုံးဟာ လူ့ဦးနှောက်ကို ဖြတ်သန်းပြီးမှ ၀င်လာတာ။ ဒါကြောင့် လူ့ဦးနှောက်ကို အညွန့်သတ်ထားနိုင်ရင် အကုန်ခြယ်လှယ်လို့ ရပါပြီ။
အသေးဆုံး ဥပမာလေးတစ်ခု ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဦးနှောက် fresh အတိုင်းထားတဲ့ ၁၀ နှစ်ရွယ် ခလေးတစ်ယောက်ကို တရုတ်ပြည်က လက်ညှိုးလောက်ရှိတဲ့ စွယ်တော်ကို ဒါ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၃၀၀၀ လောက်က လူတစ်ယောက်ရဲ့သွား လို့ ပြောကြည့်ပါလား။ သူယုံမယ်ထင်လား။
kai says: ဒေါ်စုက.. ဒါတွေဒါတွေ..မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာလား..
မျစ်မမတို့လို.. စာေ၇းဆရာတွေများလာရင်တော့.. တိုင်းပြည်အနာဂါတ်စိတ်ချရမယ်ထင်…။
အနှစ်၁၀၀၀ ကျိန်စာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9257
ဦးကြောင်ကြီး says: ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားရောက်တော့ ရွှေသင်္ကန်းကပ်တယ်။ သူများအတွက်ပါ ကပ်ပေးရတာပေါ့နော်..။ ကိုယ်လှူ တဲ့ရွှေ လေထဲလွင့်သွား.. ကိုယ်ပေါ်ပြန်ကပ်ပါလာတာ ပိုများမှန်းသိပေမဲ့ လှူ ခဲ့မိတာပါပဲ။ စေတီတော်ကြီး ဦးချနေရင်း တိုးရစ်တွေကို မြင်တော့ ကျောက်တုံးကြီး ရှိခိုးတယ် ထင်ကြမှာပဲလို့ တွေးမိတယ်။ တခုရှိတာ ဘုရားစေတီ တန်ခိုးကြီးတယ်ဆိုတာ အဲဒီဘုရားစေတီကို စောင့်ရှောက် ဆက်နွယ်နေတဲ့ နတ်ဒေဝါတွေနဲ့ ဆိုင်တယ်။ ဘုရားမတာထက် သူတို့မတာလို့ပဲ ယုံတယ်။ သူတို့မဖို့လည်း သူတို့ကြိုက်တဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်ပေး စောင့်ထိန်းပေးရတာပေါ့နော်။ ဥပမာ နတ်ဆိုတာ လူထက်မြင့်တယ် သာမန်အားဖြင့် (သီလ၊ သမာဓိပိုင်းပေါ့ဗျာ)။ ဒီတော့ သူတို့ ကြိုက်အောင် စောင့်ပေး ရွတ်ပေး ဖတ်ပေး သရဇ္ဇာယ်ပေးရတယ်။ ဘုရားခြင်း တူပေမဲ့ အစောင့်ခြင်း မတူဘူးလေ..။ ဒါကို ဒဲ့တွေးတော့ အိမ်ကဘုရားနဲ့ ရွှေတိဂုံဘုရား အတူတူပဲ ဖြစ်ကုန်တာပေါ့။ မလိုချင်လို့ ဘုရားရှိခိုးတာမျိုးဆိုလျင်တော့ ဟုတ်တာပေါ့.. လိုချင်မှု တငါငါနဲ့ ဆိုတဲ့အခါ ဘုရားခြင်း မတူတော့ဗျို့..။ အဲဒမှာ ကိလေသာကုန်ပြီးသူပြောတဲ့ ဘုရားနဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အဟုတ်ထင်နေသူတွေပြောတဲ့ ဘုရားထပ်ကုန်ရော…။ တရားလည်း ဒီလိုပဲ.. တကယ်သိသူက တရားဆိုတာ ထိုင်မှ မဟုတ် အိတ္ထိယာပုဒ် လေးပါးစလုံးနဲ့ လုပ်လို့ရတယ် ပြောတဲ့အခါ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အဟုတ်ထင်နေသူကလဲ သံယောင်လိုက်ပြန်ရော…။
Ma Ma says: ကြောင်မှ ဟုတ်ပါလေစ….. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: ကြောင်ကို Plus လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ရိုးတဲ့လူတွေကို ကြာကြာလိမ်လို့ရတယ် ဆိုတာတော့ ထောက်ခံတယ် မျှစ်မမရေ။
န၀တ ပတ္တမြားကြီး ဆိုတာ ပေါ်တုန်းကလေ ကျမအဖွားက မင်းကောင်းမင်းမြတ်မို့ ပေါ်တာဆိုပြီး ပြောလို့ စိတ်ညစ်ခဲ့ရသေးတယ်။
အခုထိလည်း ကျမ အလုပ်ထဲက ဘွဲ့ရပြီးကလေးတွေတောင် တိုင်းပြည်မှာ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ မသိကြဘူး။
စားအုန်းဆီကို ဦးပိုင်တဦးတည်း သွင်းပြီး ဆီအနောက်တွေကို ဈေးမြှင့်ရောင်းနေတဲ့ အချိန်က ဆီဈေးတွေ ဘာလို့ ကြီးနေလဲ သိလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို စာပေးစာယူ တတိယနှစ်ကျောင်းသားက ကုန်သည်တွေ အမြတ်ကြီးစားလို့ ဆိုပြီး ဖြေတယ်။
ကျောင်းသင်ခန်းစာထဲမှာလည်း ထပ်တလဲလဲ သင်လွှတ်လိုက်တာ။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .မှန်ပါတယ် အန်ကယ်ကြောင်ရေ။ မြန်မာဘုရားကို ကိုးကွယ်ရင် စီးပွားမတက်ဘူး။ ဘာလို့ဆို ဗုဒ္ဒဘာသာရဲ့ သဘောသဘာဝကိုက လောဘကိုသတ်တာ။ သို့ပေမယ့် ဘုရားတရားလုပ်ရင် ကြီးပွားတတ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နတ်ဒေ၀တာတွေ ဆိုင်ရာတွေ စောင့်ရှောက်တတ်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့် ခြုံပြောရရင် မြန်မာပြည်က နတ်ဒေ၀တာတွေ တာဝန်မကျေဘူး။ တစ်တိုင်းပြည်လုံး ဒီလောက်ထိဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်တော့ ဒီနတ်တွေလည်း သောက်သုံးကျတဲ့ နတ်တွေ မဟုတ်နိုင်ပါဘူး။
.တရုတ် အန်းကုန်း လိုမျိုးကျတော့ သူတို့က အရမ်းမတယ်။ စာချရင်လည်း မှန်တာများတယ်။ ဘာလို့ဆို သူတို့က ဘုရားမဟုတ်ဘူးလေ။ သူတို့က နတ်စိမ်းကိုး။ ဒီတော့ တိုက်ရိုက် မ တာပေါ့။
ဒါပေမယ့်လည်း အနောက်နိုင်ငံကလူတွေ ဘယ်ဘုရားမှ ဒီလောက် မကိုးကွယ်ပါဘူး။ ကစ်သလစ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ့်စိတ်လုံခြုံရေးအတွက် အာပတ်ဖြေတာမျိုးရှိတော့ အရမ်းကောင်းတဲ့ ဘာသာတရားပါ။ တိုင်းပြည်ကြီးပွားချမ်းသာရေးအတွက် မျှစ်မကတော့ education စစ်စစ်ကိုပဲ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဦးကြောင်ကြီး says: အစိုင်ဖူးလေ တီဝင့်ပြုံးရဲ့.. နတ်နဲ့လူ သဘာဝခြင်း မတူဘူး.. ခံစားနားလည်မှုခြင်းလည်း တူနိုင်ဖူး။ လူ့ပြည်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေက သူတို့အတွက် ခံစားချက် ရှိခြင်မှ ရှိမှာပေါ့စ်။ ဥမပါဗျာ… တိရစ္ဆာန်လောက ဖြစ်ပျက်နေတာကို မသင့်တော်ဘူး၊ မအေနှမ ဖအေသမီး မောင်နှမ စည်းရှိရမည် ဘယ်လူကသွား စည်းချသလဲ ကူညီသလဲ။ ဘာသိဘာသာပဲ နေတယ်မဟုတ်လား။ ဒီလိုပဲ တိရာစ္ဆာန်ထီးနဲ့အမ သံသာဝ ပြုနေတာ လူအဖို့ သာယာမှုမဖြစ်။ အရှင်းဆုံး ဥပမာပေးတာနော်.. (ရိုင်းသွားလျင် ကန်တော့တောင်းပန်ပါအိ)။ ဒီလိုပဲ လူ့လောက ရက်စက်မှု မတရားမှု ဖြစ်သင့် မဖြစ်သင့်ဆိုတာလဲ နတ်လောကအဖို့ ခံစားပေးနိုင်ခြင်မှ ပေးမည်။ ကိလေသာထူလိုက်ကြတာ.. နင်လဲမီကောင်း နင်လည်းမီကောင်းလို့ မြင်မှာပဲ။ ဒီမိုတွေ အာဏာရှင်တွေ အဖိနှိပ်ခံ ဖိနှိပ်သူ ရွေးကောက်ပွဲ ခြေဥ ဒါတွေ ဘယ်နတ်ဆိတ်ရှုပ်ခံပါ့မည်လဲ။ ဆိတ်ရှုပ်မခံစိုဒါထက် အစောက ဥပမာရိုင်းရိုင်းပေးသလို ဖီးလ်ကို မလာတာဖြစ်မဲ။ ဒါဆို နတ်မတယ်ဆိုတာ ဘာကြောင့်လဲဆို ပဌာန်းဆက်ရှိလို့ သူ့လူကိုယ့်သား အစွဲသိပ်ကြီးလို့ သိပ်နီးလို့ အကြွေးမကင်းလို့ တာဝံအပေးခံရလို့ ဖြစ်ပါလိပ်မြည်။
မြစပဲရိုး says: ပြုံးညီမ ကိုယ်မှီ ခဲ့ တဲ့ သမိုင်း အရ ဆို ကိုယ့်ပြည် က ဘယ်လို ယဉ်ကျေးပြီး သူများ ဆီမှာ ဘယ်လို ရိုင်းတာ တွေ ကိုလဲ ရိုက်သွင်းခံရတာလေ။
ဒါပေမဲ့ လက်ရှိမှာတော့ သူများဆီမှာ က အချိန် နဲ့ လိုက်ပြီး လူ့ယဉ်ကျေးမှု က မြင့်လာချိန်
တို့များ ဆီမှာ ယဉ်ကျေးမှု က နိမ့်သွားတာ။
မြန်မာပြည် ထဲ ဘာသာရေး က လဲ တစ်လွဲ ရောက်သွားတာပါ။
အစ်မ အဖွား တို့ အချိန်မှာ နည်းမှန်တဲ့ ဆရာတော်ကြီး တစ်ချို့ ရဲ့ လမ်းပြမှု နဲ့ နတ်ကိုးကွယ်တာ တွေ၊ အယူသည်းတာတွေ ပြုတ်အောင် ဖြုတ်ခဲ့တာပါ။
အဖွား တို့ အဖိုး တို့ တရား လုပ်ပေ မဲ့ အင်မတန်ချမ်းသာ ခဲ့ပါတယ်။
အခု မှာတော့ အစ်မဒုံပြောသလို မကောင်းတဲ့ ဘက် က ပိုများ နေလို့ ကောင်းတာ တွေ မြုပ် နေတာပါ။
တကယ်ဘဲ ဗုဒ္ဓတရား အနှစ် တွေ ကို ဟောပြနိုင် တဲ့ ဆရာတော် တွေလဲ ရှိ ဆဲပါ။
ဒီအတွက် အားလုံး ကို သိမ်းကြုံးပြီး ပြောလို့ တော့ မရဘူး။
နောက်ပြီး မြန်မာပြည် ရဲ့ အခု အချိန်က လက်ရှိ မြောက်ကိုးရီးယား ထက် အများကြီး သာ နေတာ ငြင်းမရတော့ဘူး။
တို့တွေ ကို မျက်စိပိတ် နားပိတ် လုပ်ထားလို့ မရတော့ဘူး။
ပြောရရင် ဒီ အတွက် (ကျေးဇူးတရား ဆိုတာ နဲနဲ ထောက်တတ်ရင်) ဦးနေဝင်း ကို တောင် ကျေးဇူးတင်လို့ ရသေးတယ်။
လောလောဆယ် အစိုးရ လဲ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် ဖြစ်နေတာ မြင်နိုင်သားဘဲ။
ဒါကို အကောင်းဘက်ဖြစ်အောင် ဝိုင်းတွန်းနိုင်ဖို့ဘဲ လို တယ်။
မဟုတ်ရင်တော့ မြန်မာပြည် က ဘာဖြစ်သွားမလဲ ဆိုတော့ လည်သူစားစတမ်း ချမ်းသာစတမ်း ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား အရမ်းကွာသည်ထက် ကွာလာလိမ့်မယ်။
အာဏာရှင် ဆိုတာ စီးပွါးရေး ကစားတတ်သူ တွေ ရဲ့ နယ်ရုပ် ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။
အခုတောင် မြင် နေရသားဘဲ။
စီးပွါးပျက်မှာ ကြောက်ပြီး ဟိုလိုစမ်း၊ ဒီလို စမ်း ဆုတ်လိုက် တက်လိုက်လုပ်နေတာ။
တကယ်တော့ ဒီ လူ တွေ တိုင်းပြည်ပျက် မခံရဲတော့ ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ဒီ အာဏာရှင် လူ စု ကို သူတို့ က ကြားပွဲစား လုပ်ပေး နေတာ။
မြန်မာပြည် မှာ အခု လောလောဆယ် ကြီးစိုးနေတာ က ခရိုနီများ (အာဏာရှင် တစ်ချို့လဲပါသပေါ့) ။
သူတို့ ရဲ့ နယ်ရုပ် တွေ က စစ်တပ် နဲ့ ဘုန်းကြီး တစ်ချို့။
ဘာသာရေးကြောင့် အာဏာရှင်မြဲ နေတာ မဟုတ်ပါ။
ဒီ အာဏာရူး တွေကြောင့် ဘာသာရေး ပျက်ရတော့မှာ။ အခု စ နေပြီ။
အစ်မ ရဲ့ ကောက်ချက် လဲ မမှန်နိုင်သလို မပြုံး ရဲ့ ကောက်ချက် လဲ လွဲ နိုင်ပါတယ်။
ဘာသာရေးမှာ သူကြီး ဝင်ဝင်ထောက် တာ ကတော့ အလွဲ ဆုံးပေါ့။
kai says: ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့.. အနော်ရထာခေတ်မှာ.. ရှိနေပြီး မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာ(အရည်းကြီးသာသနာ) ကို.. ဖျက်စီးပြီး.. ဟိန္ဒူဘာသာနဲ့ရောသမမွှေထားတဲ့..ဟိနယာနဆိုတာကို အသက်သွင်းတယ်..။
သူ့အာဏာမြဲဖို့တွက်.. .ဒေသဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေကိုသတ်ပြီး..(လူတွေကိုလှည့်စားဖို့) နတ်စိမ်းဖြစ်သွားသယောင်လုပ်.. နတ်မြေနေရာလေးပြန်ပေး.. နတ်ကိုးကွယ်မှုကိုအသက်သွင်းတယ်..။
တိုင်းရင်းသားတွေ.. တမြေထဲနေတဲ့သူတွေကို.. ရန်လုပ်.သတ်ဖြတ်စစ်ပွဲဆင်..
ကိုယ့်အချင်းချင်း.. အာဏာလု.. မျိုးဖြုတ်…။
စတဲ့.. မြန်မာ့ပြည်တွင်းစစ်.. ပဋိပက္ခတွေက.. အဲဒီကတည်းကစတာပဲ..
မြန်မာတွေက.. ဒီကျိန်စာကို ပြောင်းပြန်လှန်ခြင်ရင်.. ဒါတွေ..ဒါတွေကိုပြန်တည့်မှရမယ်..။
အတွေးအခေါ်တွေရဲ့..အမြုတေ… ဘာသာရေးကိုသွားမပြင်သမျှ. မတို့မထိသမျှ.. ဘယ်အစိုးရတက်တက်.. ဘယ်ဒီမိုကရေစီအစိုးရတက်တက်…. ဘယ်လိုစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ချုပ်…
ကောင်းတာလေးတွေ..လွဲပါတယ်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1350
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ငြင်းတော့မယ် ဆိုတာ သိသားပဲ။ ဘာသာရေးကြောင့် အာဏာရှင်မြဲတာ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် အာဏာရှင်ရဲ့ အင်အားနဲ့ ပြည်သူရဲ့ အင်အား ဘယ်ဟာပိုကြီးသလဲ။ လူထုအားက ပိုကြီးတာ မဟုတ်လား။ လူထုအားကပိုကြီးရင် ဘာဖြစ်လို့ အာဏာရှင်က မြဲခဲ့သလဲ။ လူတွေ က အတုတွေပေါ်မှာ ဦးနှောက်အညွန့်ချိုး ခံခဲ့ရလို့ပေါ့။ တကယ်လို့ မျှစ်ကြော် မှားတယ်ဆိုရင် အူဝဲလည်း မှားနေလို့ဖြစ်မယ်။ ဆောတီး – အိုဝဲ လို့ပြောတာ။
ဒီလူတွေ တိုင်းပြည်အပျက်မခံတော့ပါဘူး ဆိုတာကတော့ ဟုတ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပြောတာပါ။ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်လို့ မရဘူး။ အင်တာနက်ခေတ်မှာ မျက်စိ၊ နားကို တစ်ခါဖွင့်ပြီးရင် ပြန်ပိတ်လို့ မရတော့ဘူး။ မရ အရ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ရင် သက်ဆိုးမရှည်နိုင်တော့ဘူး။ ကဒါဖီ လမ်းစဉ်လိုက်ရလိမ့်မယ်။
မြန်မာပြည် အခြေအနေကို မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ နှိုင်းယှဉ်တာ မဟုတ်ပါဘူး အမရေ။ ဘာသာရေး လူမျိုးရေး အစွန်းရောက်တဲ့ အစ္စလာမ္မစ်တိုင်းပြည်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်တာပါ။ သူတို့လို မဖြစ်ဖို့ အစိုးရထက် duplicate God တွေကို ပိုကြောက်ရတယ်လို့ ပြောတာပါ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 301
မိုး မင်းသား says: အမရေ နေကောင်းပါရဲ့ လားခဗျာ
ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်း မုဒိတာပွားမိတယ်
အမ တို့ မိသားစု ကျန်းမာကြပါစေ
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ယုံပါဘူး။ မုဒိတာ ပွားတယ်ဆိုတာ။ ငရုတ်ကျည်ပွေ့နဲ့ ဆော်ချင်နေတာ မဟုတ်လား။ ရွာထဲလည်း ၀င်ဦးလေ။ ဒီလောက်လူချစ်လူခင်များတဲ့လူက ပျောက်ချက်သားကောင်းနေတယ်။
ခင်ဇော် says: http://blog.irrawaddy.org/2015/02/monk.html?m=1
Comments By Post" ခွဲ " - aye.kk"ဖြေ " - aye.kkJapan နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Zero-Emissions Bar - kai"မပြန်လမ်း"တဲ့လား - ပြန်ချင်စိတ်က အဓိကပါကွယ်... - kai - Thint Aye Yeikဇော်ဂျီယူနီမှသည် ညဈေးဆီသို့ - manawphyulay - ခင်ခမှော်ကမ္ဘာထဲကို ခေါ်သွားဦးမယ် ဂျေကေရဲ့ Fantastic Beasts - manawphyulayရှေ့တန်းမှ အမှတ်တရများ - kai - YUYA MONဗီယက်နမ်လား….အနောက်နိုင်ငံလား…???? - သျှားသက်မာန် - သျှားသက်မာန်ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ဟနွိုင်းမြို့မှတောင်ပိုင်း ဟိုချီမင်းမြို့ သို့ ခရီး - သျှားသက်မာန် - သျှားသက်မာန်အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း - ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆ - ကထူးဆန်း - Thint Aye Yeikဂွဇွတ်တောင်ပေါ်မှ မျှစ်ကြော်ပြုံး၏ စိန်ခေါ်သံ - ကိုပေါက်(မန္တလေး) - ၀င့်ပြုံးမြင့်" ငါ့ ကြောင့် ငါ အခါခါသေရ၏ " - kai - Thint Aye Yeikကျုံထော်ရေတံခွန်ပြန်ဖွင့်ပြီ - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeikသေးတာက တခါတလေ ကြီးတာထက် အများကြီးပိုကောင်းတယ်ဆိုတာ သက်သေပြနိုင်တဲ့ အိမ်သေးသေးလေးတွေ - သျှားသက်မာန် - kaiသင့်ရဲ့ သဲကန္တာရ အသေးစား စွန့်စားခန်းအတွက် သဲသောင်ပြင် ၅ ခု - သျှားသက်မာန် - kaiအရောင်ရင့်မှတ်တမ်း - နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၆ - kai - kaiမြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths IXXX - Kyaemonမြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXVII - Kyaemon - Kyaemonမြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် - - Myitsone Myths and Truths II - Kyaemon - Kyaemonမြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် - - Myitsone Myths and Truths - Kyaemon - Kyaemonမြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths IXX - Kyaemon - KyaemonHot ဖြစ်နေတဲ့ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ - Thint Aye Yeikမြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXVIII - Kyaemonမြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXVI - Kyaemon - Kyaemon" မော တဲ့ နေ့" - Thint Aye Yeik*** စင်ကာပူက အပြာတန်း *** (သို့) Geylang - Thint Aye Yeik - သျှားသက်မာန်" စိတ်သုဉ်းခြင်း " - Thint Aye Yeik - ဂျစ်စူ" ငြိမ်းချမ်းရေး ရေ " - Thint Aye Yeik - aye.kkNew York, Central Park ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက် (၁၂) ခု - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeikအစစ် - ၀င့်ပြုံးမြင့် - Anti Moeဖိတ်ခေါ်စမ်းပါရစေ - aye.kk - aye.kkလွမ်းရိပ်ညို - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် - ဖိုးသာထူး" စိတ်ကြီးဝင်ခြင်း " - aye.kk - ကိုပေါက်(မန္တလေး)" စိတ်ခါးခြင်း " - kai - aye.kkမြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXV - Kyaemon - KyaemonCategory	Arts & Humanities